२४ दिनमा ९ कम्पनीका लगानीकर्ताको सम्पत्ति ८९ करोडले बढ्याे - नेपालबहस
२४ दिनमा ९ कम्पनीका लगानीकर्ताको सम्पत्ति ८९ करोडले बढ्याे
| १८:१४:३७ मा प्रकाशित
२४ भदौ, काठमाडौं । २०७७ भदौ १ देखि २४ गतेसम्म ९ बैंक तथा वित्तीय संस्थाको बोनस शेयर नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा सुचीकृत भएको छ । जसमा दुईवटा विकास बैंक, तीन वटा बीमा कम्पनी र चार वटा लघुवित्त संस्था रहेका छन् ।
नेप्सेमा सुचीकृत भएसँगै धिताेपत्र बजारमा कुल ८९ लाख ४९ हजार छ सय ९९ कित्ता शेयर थपिएको छ । सुचीकृत शेयरको न्यूनतम १०० रुपैयाँलाई आधार मान्दा लगानीकर्ताको सम्पत्ति ८९ करोड ४९ लाख ६९ हजार नौं सयले बढेको छ ।
२०७७ भदौ १ गते नेप्सेमा दुईवटा कम्पनीको बोनस शेयर सुचीकृत भएका थिए । नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनीको ५ प्रतिशत बोनस शेयरले हुन आउने ५ करोड ४७ लाख सात सय ६८ कित्ता शेयर सुचीकृत भएको थियो । सोही दिन आइएमई जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनीको ६ प्रतिशत बोनस शेयरले हुन आउने छ लाख १२ हजार तीन सय ६० कित्ता शेयर नेप्सेमा सुचीकृत भएको थियो ।
त्यसपछि २०७७ भदौ ७ गते प्रिमियर लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडको १२.५० प्रतिशतले हुन आउने २५ लाख नौ हजार नौ सयर २५ कित्ता शेयर सुचीकृत भएको थियो ।
२०७७ भदौ १० गते सप्तकोशी डेभलपमेन्ट बैंकको ६ प्रतिशतले हुन आउने ४ लाख ७२ हजार दुई सय ६७ कित्ता शेयर नेप्सेमा सुचीकृत भएको छ ।
त्यसैगरी २०७७ भदौ १४ गते सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको ३२ प्रतिशतले हुन आउने तीन लाख २० हजार कित्ता शेयर नेप्सेमा सुचीकृत भएको छ ।
२०७७ भदौ २१ गते साइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंकको १५ प्रतिशतले हुन आउने ३९ लाख ३४ हजार तीन सय ५६ कित्ता बोनस शेयर नेप्सेमा सुचीकृत भएको थियो ।
२०७७ भदौ २३ गते दुई वटा लघुवित्तको बोनस शेयर नेप्सेमा सचीकृत भएको छ । सर्पोट लघुवित्त वित्तीय संस्थाको १० प्रतिशतले हुन आउने ६० हजार कित्ता शेयर सुचीकृत भएको थियो । त्यस्तै सिभिल लघुवित्त वित्तीय संस्थाको ५ प्रतिशतले हुन आउने ५७ हजार ५७ कित्ता शेयर नेप्सेमा सुचीकृत भएको छ ।
त्यसैगरी २०७७ भदौ २४ गते नागबेली लघुवित्त वित्तीय संस्थाकोको २६ प्रतिशतले हुन आउने ४ लाख ३५ हजार नौ सय ६६ कित्ता शेयर सुचीकृत भएको थियो ।
२०७७ भदौ १ गते देखि २४ गतेसम्म नेप्सेमा बोनस शेयर सुचीकृत भएका कम्पनीहरु : जसमा दशमलव पछिका कित्ता समावेश छैन ।
आईपीओ निष्काशनको तयारीमा रहेको प्रभु लाइफको अवस्था तन्नम ! ४ दिन पहिले
स्वास्थ्य बीमाको लागि सनराइज बैंक र छिन्नमस्ता अस्पतालबीच सम्झौता ६ दिन पहिले
गुराँस लाइफको त्रुटीपूर्ण हिसाबले शेयरमा उतारचढाव, १ करोड ९० लाखको हिसाब खै ? २ हप्ता पहिले
टेबलटेनिस संघले खेलाडीको बीमा गर्ने ३ हप्ता पहिले
आज एकाबिहानै झलमल्ल घाम लागेपछि राहत २५ मिनेट पहिले
कर्णाली प्रदेशसभा बैठक दुई महिनादेखि स्थगित ३२ मिनेट पहिले